Somalia oo aan wax kubad ah laga ciyaari doonin Muddo Usbuuc ah, Maxay tahay Sababtu,? – Hornafrik Media Network
Xarunta Dhexe ee Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed ayaa la xiray muddo 7 bari ah, taasoo looga baroor diiqayo Dilkii loo gaystay Cismaan Jaamac Diraac oo ka tirsanaa Guddiga Fulinta Xiriirka Kubadda Cagta.
Go’aanka ah in la xiro Xarunta SFF ayaa lagu gaaray Kulan aan caadi ahayn oo ay Gudiga Fulinta Xiriirka Kubadda Cagta yeesheen Sabtidii. Waxaana sidoo kale la joojiyay dhamaan Dhaqdhaqaaqyadda Isboorti ee Dalka Mudadaasi 7-da Cisho ah oo ka billaabanaysa 19 August ee Sannadkan oo ahayd Sabtidii.
“waxaan waynay Saaxiib wayn iyo Walaal waqtiga Noloshisa inta badan ku bixiyay horumarinta Ciyaaraha, 7 barina waa Baroordiiq cayiman, laakiin waxa uu baaqi ku sii ahaan doonaa Quluubteena waligiis,” Sidaana waxaa yiri Gudoomiyaha Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed, C/qani Siciid Carab oo soo saaray Warsaxaafadeed kadib go’aankooda baroordiiqda ah.
Allaha u Naxariistee Marxuum Diraac waxa uu ahaa Masuulkii 2-aad ee Xil sare ka haya Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliyeed oo lagu dilo Somalia shantii sanno ee la soo dhaafay. waxay ahayd 4 April 2014-kii markii uu ku dhintay Qarax ka dhacay Tiyaatarka Qaranka Gudoomiyihii hore ee Xiriirka xilli uu ka qayb galayay Sannad Guuradda Telefeshinka Qaranka.
Amarkii Agaasime Fahad Yaasiin ee ahaa in laga guuro Madaxtooyada oo maanta ku eg, maxaa ka hirgalay Amarkaas,?